DataNumen: Siyaasadda cookie
Waa maxay cookie?
Cookie waa qoraal yar oo ay websaydhadu u diraan biraawsarka waxayna ku kaydsan yihiin terminalka isticmaalaha, kaasoo noqon kara kombuyuutar shaqsiyeed, taleefanka gacanta, kiniin, iwm. sida luqadda iyo xulashooyinka la doorbido, taas oo ka dhigi karta booqashadaada xigta mid fudud oo ka dhigaysa bogga mid waxtar kuu leh. Kukiyada waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hagaajinta khibradaha isticmaalaha ee shabakadda.
Sidee loo isticmaalaa buskudka?
Markaad daalacatid degelkan waxaad aqbalsan tahay inaan ku rakibi karno 'cookies' mashiinkaaga oo noo sheeg macluumaadka soo socda:
Macluumaadka tirakoobka ee adeegsadaha isticmaalaha shabakadda.
Qaabka la doorbiday ee marin u helka websaydhka aaladaha moobaylka.
Raadintii ugu dambeysay ee ku saabsan adeegyada websaydhka iyo adeegyada qaabeynta xogta.
Macluumaadka ku saabsan xayeysiiska loo soo bandhigo isticmaalaha.
Xiriirinta xogta ee shabakadaha bulshada ee isticmaalayaasha, marin uhelkaaga Facebook ama Twitter.
Noocyada buskudka la isticmaalay
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa labada xillirarykukiyada fadhiga iyo buskudka joogtada ah. Kukiyada kal-fadhiku waxay kaydisaa macluumaadka keliya inta isticmaaleyaashu marin u helaan Webka iyo cookies-ka joogtada ah ee ku kaydsan xogta terminalka si loo helo loona isticmaalo in ka badan hal kulan.
Kukiyada farsamada: Kuwani waxay u oggolaanayaan adeegsadaha inuu ku dhex maro websaydhka ama arjiga oo uu ku adeegsado xulashooyinka ama adeegyada kala duwan halkaas. Tusaale ahaan, iyada oo la xakameynayo taraafikada iyo isgaarsiinta xogta, si loo aqoonsado kalfadhiga, marin loo helo qaybaha Webka xaddidan, iwm.
U-habeynta Kukiyada: Kuwani waxay u oggolaanayaan dadka isticmaala inay ku helaan adeegga iyaga oo adeegsanaya qaar ka mid ah astaamaha guud ee horay loo sii caddeeyay ee ku jira bartaada, ama goobaha lagu qeexay isticmaalaha Tusaale ahaan, luqadda, nooca biraawsarka aad ku dhex gasho adeegga, qaabeynta waxyaabaha la soo xulay.
Kukiyada falanqaynta tirakoobka: Kuwani waxay u oggolaanayaan kormeerka iyo falanqaynta dabeecadaha isticmaalaha bogagga internetka. Macluumaadka lagu soo aruuriyay cookies-ka noocaas ah waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro waxqabadka websaydhka, dalabyada ama boggaga iyo tilmaamidda adeegsiga habsami u socodka bogaggaan, si loo hagaajiyo adeegga iyo shaqeynta adeegsadayaasha.
Kukiyada Saddexaad ee Xisbiga: Bogagga internetka qaarkood waxaad ku rakibi kartaa cookies-ka saddexaad ee kuu oggolaanaya inaad maamusho oo aad horumariso adeegyada la bixiyo. Tusaale ahaan, adeegyada tirakoobka ee Google Analytics.
Waad joojin kartaa cookies adoo dhaqaajinaya dejinta biraawsarkaaga kaas oo kuu oggolaanaya inaad diido dejinta dhammaan ama qaar ka mid ah cookies. Si kastaba ha noqotee, haddii aad isticmaasho dejimaha biraawsarkaaga si aad u joojiso dhammaan cookies-ka (oo ay ku jiraan buskudyada muhiimka ah) waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad gasho dhammaan ama qaybaha boggeena ama degello kale oo aad booqato.
Kukiyada lagama maarmaanka ah mooyee, dhammaan cookies-yada waxay dhacayaan muddo kadib.